Sunaulo Nepal | एउटाले मन पराएकी केटि अर्काले भगाउदा कलाकार बीच तनाव “गज्जब छ बा” ! एउटाले मन पराएकी केटि अर्काले भगाउदा कलाकार बीच तनाव “गज्जब छ बा” ! – Sunaulo Nepal
एउटाले मन पराएकी केटि अर्काले भगाउदा कलाकार बीच तनाव “गज्जब छ बा” !
नेपाली हाँस्य टेलिश्रृखंलाको एक नम्बरमा रहेको सिरियल हो मेरी बास्सै । मेरी बास्सैले अधिंकाश नेपाली दर्शकको मन जितेको छ, सबैको प्रिय बनेको छ । यतिमात्रै होईन्, नेपाली दर्शकहरुले सायदै मेरीबास्सैको नाम सायदै कसैको नसुनेको होलान् । मेरी बास्सैमा आफैमा चर्चित छ । लामो समयदेखी बिभिन्न कारणले प्रशारण रोकिएको उक्त टेलिश्रृखंला अहिले पुन प्रशारण भईरहेको छ । श्रृखंलाका मुख्य दुई कलाकार सिताराम कट्टेल उर्फ धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे उर्फ सुन्तली बस्ती निर्माणमा ब्यस्त रहदै आएपनि मेरी बास्सै भने केही समयदेखी नियमित प्रशारण हुदै आएको थियो । बुझिएअनुसार अबको श्रृखंलादेखी मेरी बास्सैमा धुर्मुस पनि देखिदैछन् ।
यसैबिच मेरी बास्सैका चर्चित कलाकार भट्भटे माईला उर्फ बेगम नेपाली द्धारा लिखित एवं घिरौले उर्फ लेखान्त भुसाल निर्दशित कमेडि सिरियल गज्जव छ वा युटुब मार्फत सार्बजनिक भएको छ । यसअघि ३ भाग सार्बजनिक भईसकेको उत्त सिरियलले बुधवार युटुव मार्फत आफ्नो चौथो भाग सार्बजनिक गरेको हो । युटुब मार्फत सार्बजनिक गरिदै आएको उक्त सिरियल युटुबका लागि निर्माण गरिएको निर्देशक भुसालले जानकारी दिए । सिरियलमा बेगम नेपाली‘भट्भटे माईला’, बिनोद राई‘ ध्याम्पे सुब्बा’, लेखान्त भुसाल‘घिरौले’, अनिता, मधु आचार्य, लयागतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।
१६ बैशाख २०७४, शनिबार ०५:३१ मा प्रकाशित
सागर आले यसकारण बन्ने भए पहिलो नेपाल आइडल हेर्नुहोस खास खुलासा(भिडियो सहित)
पचास जना मन्त्री बनेपछि रविले आगो हुदै बोले तीन करोड जनताको आवाज (भिडियो)
यी हुन् रबि लामिछानेलाई ४ लाखमा किन्न खोज्ने ब्याक्ति, समाचार प्रसारण नगरे ४ लाख मन्त्रीको समेत सहयोग (भिडियो)
यस्तो थिए लोकप्रिय प्रतिस्पर्धी निशान भट्टराईको दमदार प्रस्तुति (भिडियो सहित)
अहिलेसम्म डेन्जर जोनमा नपरेका एकमात्र बुद्द लामाको यस्तो थियो दमदार प्रस्तुति (भिडियो सहित)